Osimiri kacha mma na agwaetiti Philippines (Nkebi 1) | Akụkọ Njem
Osimiri kacha mma na agwaetiti Philippines (Nkebi 1)
Njem Asia | | Philippines, Asia njem
Ọ bụrụ na-amasị gị osimiri nrọ mgbe ahụ ị ga-edebe Philippines na radar gị. O doro anya na ọ bụ nnukwu oge ezumike ezumike.
Iji hazie njem ahụ nke ọma, ị kwesịrị ịmatakwu banyere agwaetiti ya na osimiri ya, yabụ dee ihe ndị a consejos ka oghara ida ihe kacha mma.
Ọ bụ agwaetiti obodo ya mejupụtara ya ọtụtụ puku agwaetiti. Nke ahụ na-eme ka o sie ike ịnabata ibe niile mgbe ị na-ekpebi njem ma ọ bụ ya mere na ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iche echiche banyere ụzọ ahụ. Mpaghara ụgbọ elu bụ ụkpụrụ yana nke ahụ mere na ịlele peeji nke Cebu Pacific, ụgbọ elu dị ọnụ ala.
Ya obere karịa 7 puku otu narị agwaetiti ekewa mpaghara ato: Luzon, nke bu ebe Manila, isi obodo, bu, Mindanao y Ndị Visayas.
Na Luzon ị nwere ike ịga ije na akụkọ ihe mere eme Manila ma chọpụta ọdịda anyanwụ nke ọdịda anyanwụ, mana ị nwekwara ike ịga ije n'etiti osikapa teres fabulous nke di ihe dika awa isii.
Enwere uzo na Batad, Banaue, Sagada na Bontoc ma ị nwere ike ịga n'onwe gị ma ọ bụ debanye aha maka njem wee mata, dịka ọmụmaatụ, Bontoc na Sagada n'otu njem ahụ.
Ee, ọ nwere ihu igwe dị mgbagwoju anya ya mere enwere oge ọkọchị, otu iru mmiri na oge na-ekpo ọkụ, na -eche ịkọ. Nke mbụ bụ site n’ọnwa Machị rue Mee, mmiri dị n’agbata June na Nọvemba na nke ikpeazụ bụ site na Disemba ruo Febụwarị. Ọ na-ekpo ọkụ mgbe niile.
N'ikpeazụ, ị na-enye ọgwụ mgbochi? Ọ dị mkpa ịnwe Ogwu Tetanus, Diphtheria, na Hepatitis A na B. N'ịmara ihe a niile, anyị nwere ike ịga ebe kachasị mma na Philippines.
Ọ bụ agwaetiti mara mma nke dị ihe karịrị 300 kilomita site na Manila, na agwaetiti Visayas. Ọ dị ihe dịka kilomita 10 na mpaghara ya na osimiri ya mere ka ọ bụrụ otu n'ime ebe ndị njem nleta kachasị ewu ewu.
O nweghị ọdụ ụgbọ elu Ya nke mere na ọ ruru site n'oké osimiri si agbata obi n'àgwàetiti Panay na ọdụ ụgbọ mmiri ya, Caticlan. Nwere ike ịga ebe ahụ site n'ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ mmiri site na agwaetiti agbata obi ma ọ bụ site na Manila. Ga-ahụ n'ezie na ha dị abụọ ọdụ ụgbọ elu agbata obi a na-enye mgbe niile: Caticlan na Kalibo.
Otu n'ime ha, ị ga-eji ala gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri wee si ebe ahụ banye ụgbọ mmiri. Ọdụ ụgbọ elu Ekechukwu Ọ dị nso na ụzọ nke ala bụ obere oge nkeji ise mgbe 90 bụ nkeji nke kewara ọdụ ụgbọ mmiri Kalibo. Ationgbọ njem dị oke ọnụ ala, ee.
Njem ụgbọ mmiri gaa agwaetiti Boracay, karịa ụgbọ mmiri bụ ụgbọ mmiri, ọ dịkwa ọnụ ala ma dịkwa mkpụmkpụ, nkeji ise na oke osimiri dị jụụ. N’akụkụ nke ọzọ ị nwere ike ịgba igwe atọ nwere ụkwụ iji rute ebe obibi gị.
Boracay na-ekewa agbata-obi o barangay si. Mpaghara kachasị njem, ebe ụlọ mmanya na ụlọ nri dị, bụ Yapak barangay, n'ebe ugwu. Mgbe ahụ bụ Balabagay Balabag, na etiti, na ndịda bụ Manoc-Manoc barangay.
Iji gwa eziokwu aha ndị a ị gaghị anụ ọtụtụ, ị gaghị ahụ ha na magazin njem ma ọ bụ blọọgụ n'ihi n'ozuzu a na-akpọ ha Ụlọ 1, 2 na 3.
N'ihi ya, ọdụ 1 bụ Nchikota party ndụ na jụụ, e nwere a bit nke ihe niile. Ugbu a, ọ bụrụ na ị gafere n'akụkụ osimiri ntakịrị, ị ga-abanye Ọdụ 2 nke bụ etiti nke nnọkọ ahụ, mkpọtụ ahụ na njem.
Gbaso ụzọ ị rutere na ọdụ 3, nke bụ oké osimiri nke obi iru ala. Ozi ọma ahụ bụ na enweghị ụlọ nri, ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa na onyinye dị na nke ọ bụla n'ime ha.
Ọ bụrụ na njem na-amasị gị ị nwere ike iji ụgbọ mmiri si Manila rute ebe ahụ Ma ọ bụ njem dị ogologo, nke ihe dị ka awa itoolu, mana ihe dị mkpa bụ ịbịaru ma nwee obi ụtọ n'otu n'ime ụsọ mmiri iri atọ.
O doro anya na ụfọdụ nwere ewu ewu karịa ndị ọzọ: White osimiri Ọ bụ onye nọ na mbụ na ya kilomita anọ na-acha ọcha. E nwekwara Osimiri Diniwid na Puka ma ọ bụ Osimiri Bulabog, nke kachasị mma maka kitesurfing ma ọ bụ windurfing.
Ọzọkwa na Visayas bụ ógbè Palawan na ya isi obodo bụ Puerto Princesa. Ọkara agbahapụwo na a maara dị ka ókèala ikpeazụ nke obibi ụlọ na Philippines.
N’ebe ugwu enwere mmiri doro anya, ahịhịa na ahịhịa na mmiri na oke ọcha. Ọ bụ ebe ọ dị El Nido na Taytay, ebe njem nleta abụọ dị mkpa. Ha na-ji a odida obodo nke limestone ọnụ ọnụ ugwu na mma n'elu na n'okpuru mmiri na azụ na coral na ọbụna mbe mbe.
Nwere ike iji ụgbọ elu gaa Palawan na ịkwaga ebe ahụ ị na-eji ụgbọ ala. Can gaghị akwụsị ileta ndị Mmiri Coron, n'ọnụ mmiri nke otu aha ahụ: ọdọ mmiri asaa ndị gbara ugwu gburugburu, ebe dị mma maka igwu mmiri na snorkel n'etiti foduru nke ụgbọ mmiri na ụgbọ elu si Agha Worldwa nke Abụọ.
El Puerto Princesa Osimiri Osimiri Ugwu Ọ ga-ekpughere ụwa magburu onwe ya n'okpuru ala nke osimiri a nke na-abanye n'ime oké osimiri ma baa ụba n'ọtụtụ ihe dị iche iche. Nke a na ogige ọzọ mmiri ogige, na Osimiri Tubbataha, ekwupụtawo UNESCO World Heritage.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwaga ị nwere ike ịga leta obodo ịkụ azụ San Vicente nke dị nso na Puerto Princesa. Rutere n'ụgbọ mmiri ma nwee obi ụtọ na Long Beach nke 14 kilomita nke aja ọcha dị ka ntụ ọka.
Ọ dị na ndịda nke agwaetiti ahụ, na Central Visayas. Ọ nwere ọmarịcha osimiri mara mma ma ama ama maka ọmarịcha ala mara mma nke e mere aha ya na Chocolate Hills: ọtụtụ ugwu ugwu nzu nzu kesara na mpaghara nke 50 square kilomita.
E kewapụrụ ya na agwaetiti Cebu, ebe ọzọ na-atọ ụtọ, site na warara ka ọ dị mfe ịbịa ma laa. Virgin Island bụ amara, nke ire ya ọcha na-asacha na mpaghara abụọ dị n'akụkụ oké osimiri, na Lamanoc Island, obere agwaetiti dị na Anda nke emebiwo oke ma taa ọdịdị nke agwaetiti ahụ karịa nke nkume karịa floats na oké osimiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Philippines » Osimiri kacha mma na agwaetiti Philippines (Nkebi 1)
Kaiurán, obodo nke 300 alakụba na Tunisia
Nleta Gastronomic na Andalusia (II)